Ungqongqoshe uvume eyokubhubhudla imali | isiZulu
Ungqongqoshe uvume eyokubhubhudla imali
UMnyango uphebeza izinsolo ngoNdebele
UShiceka wone azi - Madonsela
UZuma ulinde umbiko kwelikaShiceka
Johannesburg - UNgqongqoshe wezeNhlalakahle eNorth West uMosetsanagape Mokomele-Mothibi uvumile ukuthi wasebenzisa u-R174 000 wemali yabakhokhintela ngesikhathi ehambele ingqungquthela ye-ANC eMangaung ngoDisemba, kusho umbiko ngoLwesithathu.
UMokomele-Mothibi uvumile esitatimendeni ukuthi wasebenzisa le mali ukukhokhela umngani wakhe nezinye izikhulu ukuba baye kule ngqungquthela ezimisele ngokuthi le mali uzoyikhokha lingakapheli isonto, kubika iBusiness Day.
Yena nezimenenja eziphezulu kulo Mnyango bavele ngaphambi kwekomidi elibhekelele izimali zesifundazwe ngoLwesibili, ngemuva kokuphuma kwezinsolo zokuthi waya kule nkomfa ngemali yabakhokhi bentela.
USihlalo wekomisi uHlomane Chauke uthe bakwamukele ukuvuma icala kukaMokomele-Mothibi.
Umholi weDemocratic Alliance eNorth West uChris Hattingh uthe leli cala kumele liye ophikweni olubhekene namacala aphathelene nezimali.